Kungani ukuya ku-sauna kuyasiza - i-sauna yabaqalayo
I-Sauna - ukuphumula nokuphila kahle
Amathiphu wokuvakasha kokuqala kwe-sauna
Iyini ukulandelana okuhle kweseshini ye-sauna?
Izikhathi ze-sauna njalo azihle kuphela empilweni yakho yangokwenyama, kodwa futhi ukuphumula ngempela. Ucwaningo aluveze lutho ukuthi kunezigidi zabantu ezingu-5 ezi-2 million saunas eFinland. EJalimane futhi, abantu abaningi kakhulu bafunga ngemiphumela eminingi ekhuthaza impilo-mzimba, isikhumba nomqondo.
Kungani kufanelekile ukuya e-sauna?
Ikakhulukazi phakathi nezikhathi ezibandayo, kunengqondo ukuba ne-sauna njalo. Ngokusebenzisa i-sauna, yonke imvelo kanye nesistimu yomzimba yokuzivikela komzimba kuqiniswa, okungeke kuphazamise ukutheleleka kwe-pathogenic.
Kubantu abaye bahlushwa ubuhlungu emuva noma ukuhlukunyezwa, kubuye kunconywa ukuba uye ku-sauna. Ukuze uthole imiphumela emihle, isiguli isiguli kufanele silale esiswini sakhe isikhathi esiningi, ukuze ukushisa okuvela esikhwameni se-sauna kukhanye ngqo ngemuva. Lokhu akugcini nje ukuvuselela imisipha ngemuva, kodwa futhi nomphefumulo. Kodwa-ke, akubalulekile ukulala lapha sonke isikhathi, kodwa futhi ukuhlala phakathi ukugcina ukusabalalisa kugxilile. Izinkinga ze-rheumatic nazo zinganciphisa ukuvakashelwa kwe-sauna njalo.
Ngezinye izifo zesikhumba, ezifana ne-acne, iseshini ye-sauna yamasonto onke kufanele ihlelwe. Ukushisa kunciphisa ngokucophelela izikhumba zesikhumba ezivalwe nge-sebum. Lokhu kuphuthukisa inqubo yokuphulukisa okuningi.
I-Sauna inconywa hhayi nje ngenxa yethonya layo emzimbeni, kodwa futhi ngenxa yokuvuselelwa kwengqondo. Abantu abaningi bayaqhubeka bebhekene nokukhathazeka nokucindezeleka, kokubili okungaphulwa ngempumelelo ngokuya kwi-sauna. Ukuvakasha kwe-sauna nakho kunconywa ukuphazamiseka kokulala, njengoba ukujuluka kukhuthaza ukukhathala kahle, okuholela ekutheni ulale ngokushesha futhi uqale usuku luhle kakhulu ekuseni.
Umfudumalo we-sauna unomphumela omuhle kakhulu kumuntu wonke. Ukushisa okushisa kudlula isikhumba kuwo wonke umzimba futhi izinga lokushisa lomzimba likhuphukela ku-3 ° Celsius. Ngalolu hlelo, yonke imisebenzi yemetrikhi yanda, ukusabalalisa kukhuliswa futhi izivikelo zomzimba ziqiniswa ngokwemvelo.
• Kubalulekile ukuqaphela ngaphambi kohambo ngalunye ukuya ku-sauna ukuthi i-sauna bese ugijime lingavumelani. Ku-sauna ngayinye uvakashela isikhathi esanele kufanele uhlelwe ukuphumula nokuphumula kahle.
• Kuphela ithawula lokugeza kanye nezimbadada kufanele lithathwe ku-sauna. Zonke izinto zokucweba kufanele zisuswe kusengaphambili, ngoba zivutha kakhulu futhi zingabangela ukulimala. Kungcono futhi ukushiya izibuko ngaphandle bese ubuyela emuva kuma-lens wokuxhumana, ngoba usizo olubukwayo luzoba khona ngokushesha.
• Kungenzeka ukuthi kufanele igwenywe ukuze ilambe ku-sauna noma idle ngaphambi kokwemnandi, ngoba lokhu akukona kahle ukuhambisa. Ngokufanayo, iziphuzo ezidakayo kufanele zingadakwa ngesikhathi sesauna.
• Labo abaphuma ku-sauna eshisayo akufanele bagxume ngqo echibini lokubhukuda, kodwa kuqala kancane bepholile emanzini bese baqala ukubhukuda.
• Ngokwesilinganiso, i-1 ne-2 amalitha omzimba womzimba alahlekile uma uthatha i-sauna, okufanele ibuyiselwe emzimbeni ngokushesha. Lokhu kulungele kakhulu namanzi amaminerali namanje.
Ngaphambi kokungena ku-sauna kufanele ihliswe kahle ukuze isuse isidumbu nganoma yisiphi isithukuthezi. Khona-ke isomile kahle, ukuze i-sweat ku-sauna ingathinteki ngomswakama oshisayo.
Ekuqaleni, ithawula lokugeza kufanele lifakwe egumbini le-sauna phakathi nebhange eliphakathi noma eliphakeme, lapho umnyango we-sauna angase ahlale phansi noma alele phansi. Ukuvakashelwa kwe-sauna kufanele kube kuhle okuhlangene nezinhlelo ezimbili noma ezintathu ze-sauna. Umzimba udinga phakathi kwe-8 nemizuzu ye-10 ukuze ifike ekushiseni, kodwa uma ukushisa kungakuzwa kahle, ngaphambili kufanele kuqalwe ekuqaleni.
Ngemuva kweseshini yokuqala ye-sauna, sincoma ukugeza okupholile noma okubandayo okulandelwa ukugeza kwomoya kanye nenkathi yokuphumula yamaminithi we-20 nge-hydration. Ukuze uvikele ukujikelezwa phakathi kwamanzi abandayo, kunconywa ukuba usebenzise amanzi kuqala phezu kwe-ankle kwesokudla, phezu komlenze kanye nezingalo, bese uqhubeka nohlangothi lwesobunxele kusuka phezulu kuya phansi. Ngemuva kwalokho i-sauna ingavakashelwa futhi nge-12 kumaminithi we-15.
Ngokuvamile kungcono ukuhlala ku-sauna kunokulala phansi. Ngenxa yalokho, ukusabalalisa kuphela kuzinzile, kepha ama-pores avule kangcono. Ekuhambeni kokuqala ku-sauna kufanele usebenzise amabhentshi aphansi kakhulu, njengoba kushisa kakhulu lapho.
Amasu wokuphumula | Ukuphumula kahle
I-sauna yase-Finnish | Wellness
I-Sauna - Ukuhambela kwe-sauna okungakufanelekile
I-Lemon yokuphila nobuhle
Jikelele Ukufaneleka, Wellness & Ukudla